नेको इन्सुरेन्सको सेयर लिलामी भर्ने आज अन्तिम दिन, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेको इन्सुरेन्सको सेयर लिलामी भर्ने आज अन्तिम दिन, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - नेको इन्सुरेन्सको ९२ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा किन्ने शुक्रबार अन्तिम दिन हो । आवेदकले शुक्रबार १.३० बजेसम्म यो लिलामी सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यस अघि कम्पनीले बिहीबारसम्म आवेदन दिन पाईने जनाएकोमा भोटेजात्रा परेका कारण सार्वजनिक बिदा दिइएकाले १ दिनको समयसीमा थप गरेको हो । कम्पनीले जेठ ५ गतेदेखि संस्थापक समूहको ६ हजार १६३.७९ कित्ता र सर्वसाधारण समूहको ८६ हजार ७२९.५३ कित्ता गरी कुल ९२ हजार ८९३.३२ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । लगानीकर्ताले लिलामीमा न्यूनतम १०० रुपैयाँ भन्दा माथी भाउ तोकेर बोलपत्र फारम भर्नुपर्नेछ । बोलपत्र नेकोको बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड नागपोखरी, काठमाडौंमा पुग्ने गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।
नेकोले फागुन ३ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्म १००% हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्दा नबिकेको सर्वसाधारण र संस्थापक समूहको सेयर लिलामीमा ल्याएको हो । यो लिलामीमा आवेदकले सर्वसाधारण समूहमा न्यूनतम १०० कित्तादेखि अधिकतम १० ले भाग जाने सबै कित्ताका लागि र संस्थापक समूहमा न्यूनतम १ हजार कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्तामा आवेदन दिन सक्नेछन् । संस्थापक समूहको बोलपत्र जेठ १४ गते दिउसो ३.३० बजे र सर्वसाधारण समूहको बोलपत्र सोही दिन दिउसो ४ बजे एनएमबि क्यापिटल नागपोखरी, काठमाडौंमा खोलिनेछ । यसको बाँडफाँड जेठ २१ गते हुनेछ । लगानीकर्ताले बाँडफाँटमा नपरेको सेयर वापतको पैसा आफुले आवेदन बुझाएको संकलन केन्द्रबाट जेठ २६ गतेदेखि फिर्ता पाउनेछन् ।